WWE Rumor Roundup - Mpikambana vaovao hanatevin-daharana ny ankolafy Roman Reigns, mangalatra ny fihetsik'i Samoa Joe i Top Superstar, Heat teo anelanelan'ny tompon-daka eran-tany teo aloha (7 Jona 2021) - Wwe
# 3. Hornswoggle amin'ny hafanana any afovoany eo anelanelan'ny The Big Show sy The Great Khali amin'ny WWE
Ilay kintana WWE teo aloha, Hornswoggle, dia niara-nipetraka Resadresaka fitifirana nataon'i James ho an'ny resaka mahaliana, nandritra izay fotoana izay no nanokafany ny resaka ambadiky ny sehatra teo anelanelan'ny The Big Show sy The Great Khali.
Hornswoggle dia nanamafy ny tantara maharitra momba ny hafanana eo amin'i Paul Wight sy The Great Khali. Nilaza izy fa nahay niditra tao ambanin'ny hoditry ny The Big Show i Khali rehefa nizara hatrany ireo fampitahorana fampitahorana tany an-tsena.
Nanampy i Swoggle fa nahafinaritra foana i Khali ny teo akaiky teo ary nanana hatsikana lehibe ny Hall of Famer WWE vao tsy ela izay.
'Izy sy Big Show dia nanana an'io hafanana goavambe io, ary nifampijerijery izy ireo teny ampitan'ny lalana, ary fantatr'i Khali ny fomba hidirana ao ambanin'ny hoditr'i Big Show. Tena miharihary fa fantany satria hanao ireo zavatra kely ireo izy hanenjehana sy hanosehana ilay bera. Tiako ilay Khali Lehibe. Tena nahafinaritra azy ny niaraka. Nanana vazivazy mahatsikaiky izy na dia tamin'ny teny anglisy tapaka aza, 'hoy i Hornswoggle.
Raha mbola tsy teo an-tsena i Swoggle rehefa niady tany an-tsehatra malaza ratsy ny The Big Show sy i Khali, nandre ny momba ilay fifanolanana ilay tompon-daka tamin'ny WWE Cruiserweight teo aloha ary sosotra noho ny tsy fahitany ilay hetsika.
'Tsy tao amin'ilay fampisehoana aho. Punk, Regal, tao izy ireo, ary henoko fotsiny fa korontana toy izao, ary sosotra aho ka tsy azoko, 'hoy i Hornswoggle nanampy. H / t Pratyay Ghosh an'ny Sportskeeda Wrestling
Te hahafantatra bebe kokoa momba ny fifanolanana any an-tsambo eo anelanelan'ny goavambe? Carlito koa nanome antsipiriany tsy mampino ny zavatra nidina ambadiky ny androtr'iny.
inona avy ireo toetra mampiavaka ny maherifo
ahoana ny fijanonana amin'ny fialonana amin'ny fifandraisana
sarimihetsika izay mahatonga anao hieritreritra ny zava-misy
ny fomba fanaovana fotoana hanidinana haingana
ny fomba hiatrehana ny maha resy